Semalt: Ahoana ny fanakanana WordPress Spam bots? - Tari-dàlana Super
Botsa-pitenenana dia mety ho mafy dia mafy rehefa mamorona statistika mahasoa ho an'ny tranonkalanao. Maneso ny fampahalalam-baovao ataonao izy ireo, mitondra fampahalalam-baovao diso ary mamela rohy spam maro ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitrao. Soa ihany, Frank Abagnale, tompon'antoka manokana avy amin'ny Semalt, dia mahafantatra ny fomba hanafoanana ny WordPress amin'ny tranokalan'ny WordPress.
Fandaharan'asan'ny spambots dia fandaharan'asa ratsy natao hanatanterahana hosoka maro amin'ny aterineto. Ireo fandaharan'asa ireo dia mikasa ny hamorona lisitra mailaka amin'ny fanelezana ny fitaovany amin'ny alàlan'ny spam amin'ny mpampiasa hafa. Raha vantany vao mamitaka olona niharan'ny herisetra izy ireo, dia mampiasa ny baikon'ilay mpanafika ny solosaina mpampiasa. Bots amin'ny spam miezaka ny misoratra anarana ho an'ny mpampiasa mpampiasa sandoka, manova ny antontan-kevitra momba ny fanadihadiana ary mangalatra ny fampahalalana mpanjifa. Tena ilaina ny fanesorana ireo bota ireo.
Nahoana ianao no tokony hanafoana ny WordSpam bots
Ny olona izay mamboly tranonkala dia mila marketing ara-nomerika indray mandeha. Amin'ny bala sivana amin'ny famonoana dia tsy azo atao ny ezaka ara-barotra dizitaly. Mihen-danja ny olana mahazo ny voka-dratsin'ny spam. Ohatra, ny spam botsy dia maneso ny angona ao amin'ny tranonkalanao mitarika amin'ny fampahalalana diso toy ny:
Ny tifitra avo lenta
Ny fifamoivoizana azo avy amin'ny toerana maro
Durations de sécurité de 0 sec
Ireo antontan-kevitra momba ny hosoka
Tsidiho ny pejy pejy pejy
Vokatr'izany, ny drafitry ny varotra ho avy dia tsy azo atao. Ankoatra izany, ireo drafitra nomerika hafa tahaka ny SEO dia misy fiantraikany ratsy..Ohatra, ny fitsidihan'ny tranonkala sandoka dia mitarika amin'ny tsy fahombiazan'ny lahateny. Ny lanjan'ny votoatin'ny tranonkala dia mitranga satria mbola mitohy ny tsy fahombiazan'ny vokatra hafa.
Mety hampiditra rohy maromaro momba ny spam ao amin'ny tranonkala fanamarihana ny tranonkala. Ireo mpampiasa anao dia mety ho lavo amin'ny fanafihan'ny phishing. Miezaka mamaly haingana ireo olana izay ahafahan'ny mpisera mieritreritra fa mpampiasa ara-dalàna ireny. Noho izany dia mety hitondra fiara eo amin'ny sehatra misy azy ireo izy ireo, vokatr'izany.
Ahoana ny hampitsaharana ny WordPress spambots
Mora ny misakana ireo bots ireo tsy hiditra amin'ny tranokalanao. Amin'ny fampiharana ny fanovana sasany, dia afaka mampihatra fepetra ara-pahasalamana ampy ianao mba hiantohana ireo mpitsidika olombelona tonga ao amin'ny tranonkalanao. Ny plugins sasany dia afaka mitondra fiarovana fanampiny amin'ny vokatry ny spambots. Ny sasany amin'ireo fomba hisorohana ny spam bots dia ahitana:
1. Mampiditra plugins of interest
Ho an'ny mpampiasa sasany dia ilaina ny mametraka plugins manokana izay afaka miaro ny tranonkalany amin'ny spam. Azonao atao, ohatra, ny plugin toy ny fanakanana fitsaboana manokana momba ny spam mba hanakanana ny mpampiasa tsy handefa spam amin'ny mailakao. Ny plugin toy ny bot block dia afaka misoroka botso avy amin'ny sasantsasany amin'ny sehatra spam-tsokosoko
Tena ilaina ny fiheverana ny loharanon'ny plugins anao. Ny plugins sasany dia afaka manatanteraka ny voka-dratsy eo amin'ny tranonkala izay mitondra voka-dratsin'ny spam. Iray plugin fiarovana dia mety ho ny Spam-analyse spam. Ity plugin ity dia mamela ny fifamoivoizana izay avy amin'ny sehatra spam momba ny fanadihadiana Google analytics.
2. Manara-maso ny sehatra fanehoan-kevitra
Amin'ny tranga sasany, mety mila manakana ny bug spam WordPress ianao, izay latsaka ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra. Azonao atao ny mampiasa plugins mba hitantana ny boka fanamarihana amin'ny fanehoana ny valin-teninao amin'ny WordPress. Mba hanaraha-maso ireo fanehoan-kevitra, mandehana any amin'ny sehatra fifanakalozan-kevitra. Azonao atao ny manova na mametraka ireo olona tokony hilaza ny tranokalanao Source .